China Batch Type Waste Tyro Pyrolysis Plant orinasa sy mpanamboatra | LYBH
Ny fomba pyrolysis dia iray amin'ireo fomba feno sy avo lenta amin'ny fitsaboana ny kodiarana fako. Amin'ny alàlan'ny teknolojia pyrolysis an'ny fitaovana fitsaboana kodiarana fako, ny akora simika toy ny kodiarana fako sy ny plastika maloto dia azo zahana hahazoana solika, karbonina mainty ary vy tariby. Ny fizotrany dia manana ny mampiavaka ny fandotoana aotra sy ny vokatra avo amin'ny solika.
1. Vohay tanteraka ny varavarana: fametrahana mora sy haingana, fampangatsiahana haingana, fanamoriana mora sy haingana.
2. Fampangatsiahana tanteraka ny condenser, tahan'ny fivoahan'ny solika avo, kalitaon'ny solika tsara, androm-piainana maharitra ary fanadiovana mora foana.
3. Fanesorana rano sy fanesorana vovoka amin'ny fomba maody: Afaka manala ny entona asidra sy vovoka amin'ny fomba mahomby izy io, ary manaraka ny fenitra nasionaly mifandraika amin'izany.
4. Fanesorana eo afovoan'ny varavaran'ny lafaoro: rivotra, famoahana automatique, fotoana madio sy tsy misy vovoka, mitahiry fotoana.
5. Fiarovana: teknolojia fantsom-boaloboka mandeha ho azy, fitaovana fitiliana tsy manimba, ultrasonikaly ary fitaovana fiarovana ho azy.
6. Rafitra fanarenana entona: may tanteraka aorian'ny fanarenana, mitsitsy solika ary misoroka ny fandotoana.
7. Fanafanana mivantana: Ny dingana manokana dia mampitombo ny faritra fanafanana ny réacteur, miakatra haingana ny mari-pana, ary mora fehezina ny maripana, manitatra amin'ny fomba mandaitra ny androm-piainan'ny fitaovana.
8. Famolavolana akorandriaka hafanana hafakely: effets insulate thermique tsara, effets effets vonjy angovo tsara.
ny kodiarana manontolodia entina any amin'ny reaktera pyrolysis amin'ny alàlan'ny modely fandefasana, mihidy sy mihidy avy hatrany ny sarony, ary avy eo pyrolyzy ny kodiarana manontolo; aorian'ny fitsaboana pyrolysis dia alefa ny etona menaka ary ny solika sy gazy dia mamakivaky ny hazavana sy ny solika mavesatra ary ny solika. Ny solika sy gazy dia miditra ao amin'ny rafitra fanamafisam-peo, ny ampahany azo hafanaina dia miharo ao anaty menaka kodiarana ary ny ampahany tsy azo ovaina dia miditra amin'ny rafitra fanamafisana ho an'ny fandoroana amin'ny alàlan'ny rafitra fanadiovana entona. Rehefa vita ny fizotran'ny pyrolysis solika sy gazy, ny tariby karbonina vy sy vy sisa tavela dia alefa avy hatrany amin'ny alàlan'ny rafi-pitatitra solika mandeha ho azy feno.
1. Ny reacteur pyrolysis dia mandray ny firafitry ny vatana fitehirizana hafanana hamerenana amin'ny laoniny tanteraka ny hafanan'ny fako, izay tsy afaka manitatra ny androm-piainan'ny lafaoro lehibe ihany, fa mamonjy solika ihany koa.
2. Ny vilany ankatoavin'ny mari-pana avo lenta dia ampiasaina ho an'ny reactor.
3. Ireo fitaovana dia miaraka amina fampitandremana fanakanana infrared sy fitaovana fanaovana kery, izay afaka mamantatra ny fisehoan'ny fikatonan'ny fantsona amin'ny fizotran'ny famokarana ary mamaha ho azy ny olan'ny fanakanana, mba hahazoana antoka fa tsy hisy ny olana ara-piarovana noho ny fanakanana ny fantsona ao ny fizotry ny famokarana.
4. Ny rafitry ny tsingerina roa sosona dia raisina ao amin'ny rafitry ny fanaparitahana, izay mifehy ny fotoana fivezivezena ao anatin'ny 2 ora. Diovina haingana ireo malaso.
5. Mampiasà rafitra fanadiovan-tsolika vaovao hamoahana ny entona aorian'ny fanamasinana mifanaraka amin'ny fenitra famoahana nasionaly mifandraika amin'izany
6. Aorian'ny tsy fahampian-drano, fanesorana solifara ary fanesorana ny fahalotoana ao amin'ny rafitra fanadiovana, ny entona mandrehitra tafahoatra dia voahidy amina compresseur manokana ary napetraka ao anaty fitoeram-panafody. Azo ampiasaina amin'ny fanafanana any aoriana izy io, na atolotra amin'ny mpamokatra entona entona entina amidy na amidy.
7. Ampiana vavahady fivarotana sy fitaovana fampangatsiahana haingana ao amin'ny lafaoro lehibe, mba hihena ho ambany 100 degre ny hafanan'ny lafaoro lehibe ao anatin'ny 2 ora.
Batch Type pyrolysis zavamaniry
Fahaizana 24 ora
Famokarana solika 24 ora
1. Ny akora ho an'ny milina Pyrolysis
2. Atsaharo ny isan-jaton'ny vokatra sy ny fampiasana azy
* Azo amidy mivantana.
* Afaka mampiasa fitaovana fanadiovana hahazoana lasantsy sy gazoala.
* Azo ampiasaina ho solika.
* Ny fitaovana fanadiovana mainty amin'ny karbaona dia azo ampiasaina hanamorana ny karbaona mainty.
* Fitaovana granulasi mainty amin'ny karbona azo ampiasaina hanamboarana sombiny.
* Ny milina famonoana hydraulic dia azo ampiasaina hanamboarana bara vy ho an'ny fitaterana sy ny fitehirizana.
* Azo ampiasaina ho solika amin'ny burner.
* Ny entona maloto tafahoatra dia azo tehirizina amin'ny alàlan'ny rafitra fitehirizana.
3. Ny solika azo ampiasaina amin'ny fikarakarana pyrolysis
Solika (solika solika, menaka kodiarana, menaka mavesatra sns ..)
Pellet mainty karbonika
b. Ny welding rehetra dia ho tsikaritry ny fomba fitiliana nondestructive ultrasonic hahazoana antoka ny kalitaon'ny welding sy ny endrika welding.
d. Ampiasaina amin'ny fitaovana fanoherana ny fipoahana, valves fiarovana, valves vonjy maika, metatra faneriterena sy mari-pana, ary koa ny rafitra manaitra.
d. Fandotoana mafy: ny matevina aorian'ny pyrolysis dia ny tariby mainty sy vy misy karbonika azo zahana lalina na amidy mivantana miaraka amin'ny sandany.
Teo aloha: Fambolena Pyrolysis Tyro tsy tapaka mitohy
Manaraka: Vidin'ny orinasa China Scrap Tyre Rubber Recycling Continuer Pyrolysis Plant 50tpd
Fambolena Pyrolysis mitohy
Fitaovana fanorotoroana vita amin'ny kodiarana
Fambolena pyrolisis malala-tontolo iainana
Zavamaniry vita amin'ny pyrolisis momba ny tontolo iainana
Fambolena Pyrolysis mitohy tanteraka
Andalana famokarana vovoka
Masinina fanodinana fiara
Tyro Fanodinana Tyro
Tyro Shredding Palnt
Masinina manapaka kodiarana
Tyre Mulch Recycle Palnt
Pal Recycling Palnt
Masinina fanodinana kodiarana taloha
Masinina fanodinana fako
Pyrolysis fanodinana fako
Antsipiriany momba ny vokatra: lafaoro famaky mitohy tsy tapaka, fantatra amin'ny hoe lafaoro famakiana karazana U, dia natao ho an'ny fasika solika solika sy fotaka fanodinana fako, ny lafaoro lehibe dia mizara roa: lafaoro maina, lafaoro carbonization. Ny fitaovana dia miditra amin'ny lafaoro maina, ny fanamainana aloha, ny etona amin'ny rano, ary avy eo miditra ao anaty lafaoro famolavolana karbaona, ny rotsakorana solika ao anatiny, ary avy eo ny fivoahan'ny fenitra sisa tavela, hahatratra hatrany ...
Batch Pyrolysis Plant, Fanadiovana plastika maloto, Masinina fanodinana plastika, Fambolena Pyrolysis mitohy, Tyro Pyrolysis, Masinina fanodinana fako,